Boboca uumuudhaan dabalinsa walfakkataa ta`een wantoota fakkassaa lamma giddutii tamsaasa.
LibreOffice`n boboca giddu gala walittii aanan fakkasuun bu`aasaa gurmeessa.
Choose Gulaali - Diibaa-qaxxaamuraa (LibreOffice Qofa fakkasa)
Cross-fadingiif dirqaloota qindeessa.
Lakkofsa Boboca wantoota folataman lamaan gidduttii barbadu galcha.
Sararoota fi gatiinsa amaloota wantoota filatamaniif cross-fadingii fayyadama. Fakenyaaf, Yoo wantootnii filataman halluwwan garagaraan gutamaan, halun ce`uumsaa halluuwwan lamaa gidduttii faayidaara ola.
Ce`uumsa Laafaa ta`ee wantoota filataman gidduttii fayyadama.
Title is: Cross-fadingi